Tratra ny sisin-damban'ny tromp, mandrehitra ireo Amerikana mandositra rehefa ravana ny toekarena? : Martin Vrijland
Tratra ny sisin-damban'ny tromp, mandrehitra ireo Amerikana mandositra rehefa ravana ny toekarena?
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Janoary 2019	• 30 Comments
Toa ny fampidinana ny toekarena amerikana eo ambanin'ny Trump dia tsy maintsy ho tonga amin'ny fara-tampony amin'ny alàlan'ny fehezan-dalàna momba ny ady. Ankehitriny, mpiasa an-trano an'arivony no tsy mandoa ny karamany, na inona na inona efatra amin'ny dimy Hisy loza noho izy ireo miaina amin'ny fandoavam-bola hividianana azy. Miresaka momba ny olona 800.000 sasany isika izay mety hisy fiantraikany. Tsy loza voajanahary manerantany ho an'ny firenena manana mponina 325 tapitrisa, fa mety ho ny firongatry ny korontana ara-tsosialy. Raha any Frantsa ny akanjon'ny jiro dia antsoina amin'ny banky, azonao eritreretina fa mety tahaka ny any Etazonia no mety hitranga raha toa ka tsy afaka miverina intsony ny olona.
Nanazava aho nandritra ny taona maro fa ny toekarena amerikana eo ambanin'ny Trump dia midika hoe lavo. Ny fahefana avy amin'ny empira amerikana dia tokony hianjera mba hizotra amin'ny lalana mankany amin'ny fitsanganan'ny fanjakana vaovao; ny Fanjakana Ottoman. Izany rehetra izany dia hanova ny fifandanjam-pahefana amin'ny fomba izay ahafahana manangana tolona farany amin'ny manodidina an'i Jerosalema. Manana sora-pampianarana ara-paminaniana isika ary mahita ireo hetsika ara-politika izay tsy miraika sy manohitra ny natiora. Ny populism na ny fitiavan-tanindrazana dia mifandray amin'ny olona manana tsikera amin'ny fanatontoloana. Raha avelanao hidina io vondrona io, amin'ny fampidirana ny tsy fahampiana ara-toekarena sy ny krizy (izay efa antomotra) ho azy ireo, tsy vitan'ny hoe ny fiovan'ny herinaratra angatahina fotsiny ihany, fa koa ny vozona voatifitra ho an'ity vondrona matanjaka ity.
Raha ny hevitro, ny rindrina izay tadiavin'ny Trump dia tsy mikendry ny hitazona ireo mpitsoa-ponenana lazaina fa mpitsoa-ponenana ao amin'ny sisintanin'i Meksikana amin'ny fandroahana an'i Etazonia. Na dia mety mahita sarin'ireo mpitsoa-ponenana manontolo aza isika ho toy ny alibi eo anoloan'io rindrina io, tsy midika izany fa ny marina ihany koa. Izay azon'i Hollywood atao, ny tompom-pahefana dia afaka mampino ihany koa fa ny olan'ny olo-manan-kaja dia be. Izay rehetra miditra amin'ny tetika manipulation sary izay ahafahana manamboatra kitapo miaraka amin'ny olona izay tsy tena ao an-tranon'ny zaridaina sy an-dakozia, dia mety hieritreritra fa tsy voatery haneho ny marina intsony ireo sary. Raha ny fijeriko, io rindrina io dia tokony hanakana ny vahoaka Amerikana tsy handositra any Meksiko rehefa mipoaka ny bala ara-toekarena.
Ny tromp dia tsara amin'ny làlana hanodina izany bala izany. Na dia toa mampiseho vaovao tsara aza ny angona ara-toekarena amerikana dia mety ho noho ny tsy fisian'ny antokon'olona vitsivitsy amin'ny antontan'isa sy ny kaonty Creative. Tahaka ny any Azia ny ZZPers dia tsy tafiditra ao amin'ny tarehimarika tsy an'asa. Ny fihazakazaka amin'ny tarehimarika dia miasa tsara foana raha te ho afaka mitondra vaovao tsara ianao. Ny zava-misy dia ny tsenan'ny tahiry, indraindray dia fikomiana kely fanantenana, dia nirintona tao anatin'ny herinandro vitsivitsy. Izany dia satria efa tapitra ny andro, izay ahafahan'ireo orinasa amerikana manamboatra ny vidiny amin'ny vola maimaim-poana amin'ny alalan'ny fividianana ny azy manokana. Toy izany koa, toa tsara ho an'ireo orinasa ireo. Nandritra ny taona maro dia zavatra tsara teo amin'ny tsena izany. Ny FED dia nanakana ny fandefasana ity vola maimaim-poana ity ary koa ny fanombohana ny fihenam-bidy. Miaraka amin'ny ady varotra Trump, dia ity no idealy vovoka idealy ho an'ny fandaniana ny toekarena Amerikana sy ny dolara.
Any Eoropa dia mahita fiomanana mitovy amin'izany isika amin'ny fikorontanana mitranga. Ny Brexit no dingana voalohany tamin'io lalana io ary ny hetsika vovobony mavo amin'izao fotoana dia manampy amin'ny fampielezana ny korontana avy any Frantsa (jereo ny lahatsoratra teo aloha). Ny fahaverezan'ny toekarena amerikana dia hiaraka amin'ny faharavan'ny OTAN. Efa hitantsika izao ny famantarana eo amin'ny fifandirana eo amin'i Tiorkia sy Etazonia any avaratr'i Syria. Ny faminaniako dia ny handehanan'i Torkia ao anatin'ny vakansy herinaratra ho an'ny tenany manokana ao Eoropa ary ho mora ny hanatratra ny faniriana Ottoman. Ny faminaniana hafa dia ny hoe ny rindrina namboarina tany Etazonia dia tena natao hananganana ny vahoaka amerikana raha vantany vao mipoaka ilay fipoahana. Io rindrina io dia hampiharina amin'ny rindrin'ny fonja ho an'ny vahoaka Amerikana.
Lisitry ny rohy loharano: cnbc.com
Inona no tena antony mahatonga an'i Etazonia hanangana hery lehibe ao amin'ny sisintanin'i Meksika?
Iza no mandoa ny fandefasana ireo mpitsoa-ponenana manoloana ny sisintany Meksikana-Amerikana? Firaketana miafina
Miantso ny tontolo silamo i Erdogan mba hiray hina
Tags: America, Malagasy, korontana, Toe-karena, Eoropa, Featured, sisin-tany, Mexican, Meksika, rindrina, Trump, vorontsiloza, Val
11 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 21
Fanadihadiana tsara. Ny dingana manaraka ao anatin'ny korontana Amerikana dia ny fampiasana ny tobin'i FEMA.
Fa izy ireo dia hiantso azy hoe toerana fialofana.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 28
Tsy mizara izany fomba fijery izany aho! Ny fampitahorana ny fampandrosoana an'i Eoropa dia ady politika eo amin'i Alemaina (Merkel) miaraka amin'i Frantsa (Macron) sy ireo firenena rehetra izay maniry ny hanitatra ny fanatontoloana sy ireo firenena izay te-hampitsahatra izany! Tsy ho ela dia hisy ny fiarahamonin'ireo firenena izay te-hiasa ho an'ny sendikà sendikà Eoropeana sy tafika Eoropeana (tsy manohitra an'i Rosia, eny an-dalana). Tsy hitranga ny Brexit ary any Frantsa dia hiantoka ny governemanta sosialista an'i Macron. Araka ny efa nambarako nandritra ny taona maro, tsy maintsy hanao safidy lehibe i Frantsa. Aorian'ny fihevitro, ny Frantsay dia hanambatra ny fiarahamonin'ireo firenena eoropeana izay hanavao ny sendikà. Raha tsy manao izany safidy izany i Frantsa, dia hisy ny fizarazarana farany avy any Eoropa atsinanana miaraka amin'i Eoropa Andrefana sy ny faritra avaratra sy afovoan-tanàna mifandraika amin'ny faritra atsimon'i Eoropa.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 48
Mety ho dingana midadasika tokoa izany, saingy amin'ny fotoana iray ihany dia antony iray ho an'i Erdogan ny mametraka ny filaminana. Angamba na amin'ny fangatahan'i Merkel 😉
Jereo ny lahatsoratra teo aloha.
Ny fifamatorana eo amin'ny Empira Ottoman sy Alemana dia manan-tantara (jereo ny Ady Lehibe Voalohany). Tsy mahagaga raha maro ny Tiorka any Alemana.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 19: 35
Alemana dia tsy firenena mahaleotena notarihan'ny Alemà. Namoy ny WN2e WO i Alemana ary hatramin'izao i Alemaina dia nanjakan'ny olona tsy manana alemana saingy mampiasa anarana alemà toa an'i Merkel ho an'ny vahoaka. Alemàna dia tarihin'ireo ahiahiana mahazatra, satria saika ny firenena eoropeana rehetra dia tarihin'ireo ahiahiana mahazatra. Ireo ahiahiana mahazatra dia ireo olona ahiahiana amin'ny ankapobeny. Etsy an-danin'izany, manana ny ahiahin'ny "nasionalista" mahazatra toa an'i Trump, Putin sy Merkel izay miafina amin'ny vahoakany ihany koa izy ireo fa tsy Amerikana, Rosiana ary Tiorka. Ireo rehetra ireo mpitarika mampiasa ny / ny mponina amin'ny alalan'ny thesis sy fanoherana-kevitra izany, mametra ny fahalalahana miteny, kolikoly haino aman-jery, matahotra resa-betaveta antsoina hoe filazana ny 3e ny loza sns mba hahazo ny NWO jadona ho an'ny tsirairay. Mazava ho azy fa voatahiry ho an'ny vahoaka izany. Samy mifankahalala sy miara-miasa avokoa ny olona ahiahiana amin'ny ankapobeny ary ny ahiahin'ny "nasionalista" mahazatra. Any an-tampon'ireo "toby" ireo no ahiahiana ho mpitarika mahazatra izay mitarika izany rehetra izany, manome torolalana sy mandrindra. Iza firenena ao ambadiky izao, dia tsy milaza satria velona izay ihany koa ao amin'ny mangina maso didy jadona any Holandy ny mahazatra ahiahiana. Azo antoka fa tsy azo atao Merkel manaiky Erdogan miantso ny "macho Islamista" mba hanafika an'i Alemaina na toy ny alibi dia hanome mifandray amin'ny ny fananganana ny unipolar NWO. Azo alaina miaraka amin'ny olona ahiahiana mahazatra ny zava-drehetra. Eritrereto ny tsy azo ialàna raha miresaka ny ahiahiana mahazatra ianao.
12 Janoary 2019 ao amin'ny 12: 40
Ny fitadiavam-bidy rehetra dia mahatsikaritra fa tsy lojika raha tsy nolazainao tao fa lojika 🙂
Mampalahelo ny tsy ahitanao ny firenena ao ambadik'ireo ahiahiana mahazatra. Moa ve izany
tena ho firenena 1 ve?
Tsy maintsy miaina tsy misy hatak'andro isika amin'ny tahotra izay tena mazava, tahotra matahotra-tereur
Firy ny ady mangatsiaka? (miresaka momba ny tahotra)
Yuri Goosen nanoratra hoe:
11 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 39
Mandra-pahoviana ianao no manantena fa handao an'i Eoropa? Avy eo dia fantatro ny fotoana hialany!
11 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 46
Mihevitra aho amin'ity taona ity.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 16: 45
Tsy manantena aho fa haingana. Heveriko fa 2025 na zavatra hafa aoriana.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 17: 37
Na inona na inona amin'ny 2023
11 Janoary 2019 ao amin'ny 17: 50
Eny, i Martin dia tsy ny olon-drehetra no nianatra ny fifanarahana Lausanne 😉, fa ny habaka habitat aloha dia tsy maintsy noforonina ao amin'ny faritra 😀
11 Janoary 2019 ao amin'ny 16: 14
Raha milaza an'i Torkia ianao dia tokony hanome anarana an'i Shina, Rosia, Iran ary Isiraely amin'ny fofona iray ihany. Tel Aviv Lasa ny vaovao Silicon Valley hampiditra Intel ny R & D Labs, sns, Shina fanorenana ny foto-drafitrasa (jereo koa ny mitana Tel Aviv) sy ​​Afrika, Rosia dia manome ny fiarovana sy Iran dia hitondra andraikitra ny antsoina hoe -Stan firenena fahiny Khorasan. Afaka nampiditra an'i Arabia Saodita izy ireo tamin'ny fampiasana ny CIA Arabia Saodita sy Torkia taorian'ny fihantsikan'i Khassogi. Ianao no mieritreritra ny fomba mbola tonga ny teknolojia, dia mila handalina any an-Talpiot fandaharana (anisan'izany Promis) Io no lehibe indrindra famindrana teknolojia teo amin'ny tantaran'ny olombelona. Na dia lehibe noho ny ady nandritra ny ady, araka ny nilazan'i Antony Sutton azy. Hitantsika ny fahaverezan'ny Tandrefana sy ny fiposahan'ny Atsinanana (BRI) amin'ny lalao macro Hegeliana.
Ary raha toa ka sahiran-dàlana ireo mpitsoa-ponenana mandalo eo amin'ny sisintany miaraka amin'i Etazonia, ny sidina avy any Afrika sy Amerika Amerika dia mandeha mankany amin'ny sisintany miaraka amin'i Meksika saika isan'andro. Ny fikarakarana manontolo no manamora ny CIA sy ny Mossad, satria mijanona ho kamiao tsy fahita any amin'ny sisintany.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 16: 23
11 Janoary 2019 ao amin'ny 16: 28
11 Janoary 2019 ao amin'ny 17: 17
kamiaonan'ireo ahiahiana mahazatra: D, mazava ho azy fa tsy afaka miresaka momba izany izahay. Ho an'ny ambiny, manaiky anao aho, fifantenana avy amin'ireo lahatsoratra Alerts Google izay azoko
11 Janoary 2019 ao amin'ny 18: 30
Inona no ataon'ireo mpitsoa-ponenana matavy, matavy sy matavy tsara, manao akanjo tsara tarehy tsara tarehy? Hollywood asehoy angamba?
12 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 06
Nosokajina izy io ary navelako ny fanodikodinan'ny teknolojia. Ny fifehezana ny saina rehetra ho an'ny vahoaka, ny iray dia tokony hitazona ny fitokisana amin'ny puppet Trump ary mihevitra fa tena ilaina io fefy io. Raha ny antontan'isan'ny mpitsoa-ponenana dia mampiseho fa misy ny olona marobe tsy misy idiran'ny governemanta any ambanivohitr'i Obama raha oharina amin'ny kabinetra Trump, ny grenady taorian'ny sakafo hariva sy ny lahateny fototra. Ny zavatra iray hitantsika eto amin'ny EU miaraka amin'ny adihevitra Frontex, aorian'ny fijaliana dia misy antsoina hoe fanapahan-kevitra hentitra avy amin'ny Vondrona Eoropeana, raha mbola hita fa misy ny fihenan'ny isan'ny mpifindra monina. Nampiasaina ihany koa ireo mpampijoro (May, Merkel, Macron sns) ho iray amin'ireo fanehoan-kevitra maro hanitarana ny EUROGENDFOR.
12 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 10
Eny, mbola tsy niteny aho raha efa misy lahatsoratra iray izay manohana ny tranga iray manontolo, azo antoka fa azo 🙂
Ny Chancellor Alemana Angela Merkel sy ny Filoha Frantsay Emmanuel Macron dia hanao sonia ny fifanarahana "Aachen", taorian'ity volana ity izay hifandrindra ary koa ny hetsika iombonana momba ny asa fitandroana filaminana.
Ambony kokoa - eo amin'ny sisin-damosin'ny sisin-tanin'i Frantsa-Alemana dia hamporisihana hanangana "Eurodistricts" izay ahafahan'ireo firenena roa ireo hampiakatra ny rano, ny herinaratra ary ny tambajotra fitateram-bahoaka.
Berlin sy Paris dia hanome vola hampandrosoana ireo faritra sisintany ireo, izay mety ho tafiditra amin'ny hopitaly iombonana, sehatra orinasam-pandraharahana na tetikasa ara-tontolo iainana. Ny manampahefana sasany dia mihevitra ireo fanandramana ireo ho toy ny mpangataka amin'ny fampidirana ny EU. - Ny Times
12 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 41
Azo antoka fa izany dia hampitony ny hetsika Vest Yellow Yellow ...
Tsia .. ary izany indrindra no fikasana
12 Janoary 2019 ao amin'ny 14: 31
Marina izany. Ny fandaharam-potoana fandaharam-potoana rehetra dia ny fikorontanan'ny vahoaka amin'ny fampielezan-kevitra izay mitranga amin'ny alàlan'ny haino aman-jery hafa ihany koa. Ireo farany dia manana ny antsoina hoe afo manokana indrisy fa tsy.
13 Janoary 2019 ao amin'ny 18: 36
Ny tiako holazaina amin'ny "manipulation technologique" amin'ny psyops, counter intel etc.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 20: 28
Ny tena marina dia mampiseho ny lalao hanoanana! Mba hitazomana ny omby (feo) ao anaty boaty. Mahagaga fa ny Afrikana sy ny Amerikana Tatsimo dia te-hiaina ao amin'ny tontolo tandrefana tsara indrindra. Isika dia manjò azy ary maniry hiverina amin'ny fototra, tsara amin'ny masoandro. Raha te hiaro ny lazanao ianao dia manamboatra fefy manodidina azy ireo. Somary nihatsaravelatsihy mba hitaky ny USA, raha nangalatra ny Indiana tsy ela izany. Raha toa ka nisara-kevitra tsindraindray ity tontolo ity, dia tsy nanam-pahadisoana mihitsy ianao. Mazava ho azy fa hisy foana ny olona izay manana trano tsara kokoa. Isika rehetra dia tia ny zava-pisotro iray fa eo anelanelan'ny zava-pisotro izay tsy maintsy hosoloanao ny tranonao ary mitazona izany raha tsy izany dia tsy hisy shit. Ny dokotera izay manasitrana ankizy dia mahazo ny divay tsara indrindra ary mandeha ao anaty fiara lehibe indrindra, tsy misy miahy. Saingy ireo vondron'olona vitsy an'izao tontolo izao izay manana izao tontolo izao amin'ny tongs dia afaka mijanona fotsiny amin'ny fandoavana. Ny harena sy ny fitiavam-bola dia mamotika ny zava-drehetra, ary faly indrindra isika miaraka amin'ireo olon-tiantsika izay miaraka amintsika satria tiany izany, fa tsy izaho.
11 Janoary 2019 ao amin'ny 21: 27
Miala tsiny ny polisy Alemana
11 Janoary 2019 ao amin'ny 21: 29
Polisy tandrefana Sharia
12 Janoary 2019 ao amin'ny 09: 22
12 Janoary 2019 ao amin'ny 15: 48
Na Amerika Avaratra na Eoropa, dia miomana ny fotoana rehetra. Ordo ab Chao
Ho an'ireo izay nanadino ny zaridaina Brexit, antsoy ny ProductiehuisEU kuch
"Raha tsy azo atao ny fifidianana dia tsy hamela azy hanao izany isika."
13 Janoary 2019 ao amin'ny 17: 22
@Salm, ny daty nanaovana ny fifidianana dia nilaza ny 29 March 2019 tao amin'ny PM XUMMX. Firy 11 no azonao amin'ny daty. 😉
14 Janoary 2019 ao amin'ny 00: 12
.. Midika izany, mazava ho azy, rehefa tsy maintsy mandao ny EU miaraka amin'i Etazonia na tsy misy fifanarahana ny UK ary sahala amin'ny hoe miasa amin'ny farany izy ireo amin'ny vokatra lojika eo amin'ny roa tonta ao amin'ny Ranomasina Avaratra.
15 Janoary 2019 ao amin'ny 19: 57
Riffian, tokony tadidinao fa ny Anglisy sy ny Anglisy dia nidina tany amin'ny Vondrona Eoropeana noho ny fihantsiana diso. Izany dia nitranga tamin'ny taona 70 notarihin'i Edward Heath izay nandefa sonia fifanarahana miafina antsoina hoe FCO 30 / 1048.
"Ny tsiambaratelo taratasy, tamin'ny Aprily 1971, Soso-kevitra ny Governemanta shouldering mitandrina ny Britanika-bahoaka ao amin'ny maizina momba ny zavatra EEC mpikambana dia midika maminavina fa mety haka 30 taona ho an'ny mpifidy ny tonga saina izay nitranga izay fotoana dia ho tara loatra ny hiala. "
Niaraka tamin'ny Anglisy, nifidy tamin'ny lalàm-panorenana Eoropeana tao amin'ny 2003 izahay ary nosoloana ny tendron'ny tsirairay tamin'ny fifanarahana tany Lisbonne. Tsy maintsy miaiky ny teny anglisy izy ireo dia efa nahavita nanapaka ny fifandraisana amin'ny fikambanana tsy refesi-mandidy ny foibeny ao Brussels sy handeha amin'ny lalany. Amin'ny manaraka, ny teny anglisy dia tsaratsara kokoa, manaraka aloha ny asidra.
Aorian'ny vazy ao Rutte isika izao dia manana ny pentila misy ny pizza May, tsja 😀
16 Janoary 2019 ao amin'ny 19: 14
misaotra ny vaovao mahasoa!
15 Janoary 2019 ao amin'ny 09: 55
Voalohany dia vahoaka tsy manan-kialofana
Ambonin'izany dia niharan'ny loza
Manaraka izany ny mpifindra monina
Farany dia ho anareo izany
« Ireo mpampihorohoro Kiorda eo ambanin'ny fantsom-bokatra mavomavo fanoherana an'i Frantsa dia niteny hoe Erdogan
Hifarana avy any amin'ny Vondrona Eorôpeana i Friesland: hahatonga an'i Fryslân ho lehibe! »